Archives | မာသင်
by marthin | Apr 25, 2020 | စီးပြားေရး ဒိုင္ယာရီ
Good = ကောင်း။Better = ပိုကောင်း။Best = အကောင်းဆုံး။ Good — ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ဘယ်အရာ၊ဘယ်အပိုင်းတွေ ကောင်းတယ်လို့customer သုံးစွဲသူတွေ ပြောကြလဲ ? Better — ဒီထက် ပိုကောင်း အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? Best — အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဘယ်အရာတွေပြောင်းလဲ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု..လုပ်ငန်းရှင်မပါလဲ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ Self-sustaining organism လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ဘာသာသူ ရှင်သန်ကြီးထွားပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်မှသာ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က ပဲ့ထိန်းပေးဖို့သာလိုပြီး၊ အချိန်တွေ ပိုထွက်လာပြီး...
အာမခံချက် ၃မိနစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအိုင်ဒီယာ တစ်ခု ရစေမည်။”သင့်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးရှိမယ့် အိုင်ဒီယာ တစ်ခု ရလိမ့်မယ်လို့အာမခံပါတယ်။အချိန် ၃ မိနစ်ပေးပြီး ဒီစာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။” စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း အာမခံချက် တစ်ခုကို...
သုံးပွင့်ဆိုင် (သို့) စွန့်စားမှု၊ ဘဝ၊ စီးပွားရေး
မစွန့်စားနိုင်ရင်…၊ မတိုးတက်နိုင်ဘူး။မတိုးတက်ရင်…..၊ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဖြစ်မလာရင်..၊ ပျော်ရွင်ကျေနပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပျော်ရွင်ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူး ဆိုရင်…၊ဘယ်အရာက ဘဝမှာ အဓိပ္ပါယ် ရှိသေးလို့တုန်း ။ ။ ဒါကြောင့်…… စီးပွားရေး၊ ဘ၀...
မနက်ကို မေးရန်မေးခွန်းတစ်ခု …..ညပိုင်းတွင် မေးရန် မေးခွန်းတစ်ခု ….. နေ့တိုင်း မေးခွန်း (၂) ခု မေးသင့်သည်။ မနက်ပိုင်း တွင် … မေးရန် (၁) ဒီနေ့ ဘာတွေ လေ့လာချင်သလဲ ? နေ့ တစ်နေ့ကို ထိုမေးခွန်းနဲ့စကြည့်ပါ။ အဲဒီနေ့က ပိုပြီး အကျိုးရှိစွာအချိန်ကို အသုံးချမိတဲ့...